Hanery amin’ny hanaovan’i Frantsa ny resaka ilaina momba an’i Afrika ve ny hanihanin’ny Mondialy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 6:54 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, Ελληνικά, Français, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny fandaharana Daily Show iray iarahana amin'i Trevor Noah mpiantsehatra Afrikana Tatsimo sady mpanolotra fandaharana, nilazany fa ny fandresen'i Frantsa dia fandreseny ihany koa.
Nitsiky aho tamin'ny voalohany nahita ny sary-sy-soratra tamin'ny randram-baovaoko Twitter. Tsy vitan'ny hoe nahazo ny amboara Mondialy 2018 i Frantsa, fa nizara ny hafaliany ihany koa ny Afrikana aty amin'ny kaontinanta ary nanao izay hampisongadina ity lanonam-panatanjahantena ity ho misy antom-pifaliana fa misy anjara fandreseny ihany koa ao. Amin'ny maha-sady olom-pirenen'i Madagasikara no maha-olompirenen'i Frantsa ahy, izany no fotoana “nahazoako ny mofomamiko sy nihinanako izany koa”. Nampanaintaina ny lalao famaranana, satria nanjaka ny Kroaty, saingy rehefa naneno ny kiririoka famaranana, feno fifaliana tao amiko tokoa aho satria nody ventiny ny rano natsakain'ityekipa tanora miasa mafy dia mafy ity tamin'ny nahazoany ny amboara faratampony.
Afa-po tamin'ny fankalazana aho ary niezaka ny niato kely satria fantatro tsara izay zavatra hitranga manaraka. Manana fifandraisana akaiky amin'ny kaontinantan'i Afrika ny mpilalao 15 amin'ireo 23 mandrafitra ny ekipam-pirenen'i Frantsa io. Fa tsy nihevitra aho fa hoavy faingana toy izao ny fifandirana.
Toy ny ravidraviny ivelany izany tamin'ny voalohany, fa nivadika ho sary-sy-soratra an'aterineto nifampizarana in'arivony manerana an'izao tontolo izao izany. Dia lasa toy izao izany avy eo:
Nahazo ny Mondialy i Frantsa fa fandresen'i Afrika ihany koa ny fandreseny.
Maro no mihevitra fa betsaka ny lahatsoratra milaza iza, ka andao ary aloha hojerena voalohany izay tena miharihary.
Fandresena ho an'i Frantsa io: Teraka tao Frantsa avokoa izy rehetra ary tsy mitsahatra ny mamerimberina ny fitiavany sy ny hambony ho an'i Frantsa. Tsy misy isalasalana izany. Tahaka ny fahadalàna ny mbola mamerimberina izany, saingy rehefa hita ny resabe any amin'ny sehatra sasantsasany, dia tahaka ny tsy maintsy atao ihany izany (tahaka ny nataon'ny filohan'i Etazonia teo aloha Obama).
Tahaka ny ankamaroan'ny sary-sy-soratra, saika natao tao anatin'ny fanalana azy daholo izany, tahaka ny nataon'i Trevor Noah. Fa amin'izay fotoana izay ihany, nosoritany ny fahalalana tsotra mbola tsy maintsy atrehin'i Frantsa—tanjaka ny fimaroana ary misy ireo taranaka mpifindramonina avy any amin'ny zanatanin'i Frantsa taloha. Tahaka ny hanihany mahafinaritra, nilaza fahamarinana sasantsasany sarotra atelina momba an'i Frantsa i Noah. Ary taorian'izany dia tsy hitan'ny Frantsa intsony izay mampihomehy amin'izay hanihany.
Maha-Afrikana sy maha-Frantsay
Talohan'ny lalao famaranana, feno fanehoan-kevitra ny forum an'ireo elatra farany havanana ara-politika milaza fa ny tena Eoropeana avy any Kroasia no hitan-dry zareo ho akaiky azy kokoa noho ny ekipa frantsay amin'izao fotoana izao. Taorian'ny famaranana, nisy fomba fijery azo iadian-kevitra mampanahy avy amin'ny vondrona hafa tsy faly, nanoratra taratasy tany amin'i Trevor Noah amin'izay dikan'ny hoe mainty any Frantsa ny Ambasadaoron'i Frantsa any Etazonia, Gérard Araud:
Tsy tahaka ny any Etazonia, tsy mijery ny olom-pireneny amin'ny foko (volonkoditra), fivavahana na fiaviana i Frantsa. Ho anay tsy misy ny fanondroana misy tsipi-panohizana. Zavamisy ho an'ny tsirairay ny fototra (fiaviana). Amin'ny fiantsona azy ireny ho Afrikana dia tahaka ny mitsipaka ny maha-Frantsay azy ianao. Na dia ao anaty vazivazy aza dia toa manome rariny ny ideolojia izay mamaritra ny fahafotsiana ho hany fomba tokana maha-Frantsay.
Mila fandinihana akaiky kokoa ny fanambaràna hoe “mitsipaka ny maha-Frantsay azy ianao“. Namoaka ny mari-panondroana maha-Afrikana azy ao anatin'ny fahamatorana mihoatra noho ny taonany i Kylian Mbappé, ilay tanora mahay nahomby tamin'ny fampidiram-baolina efatra tao anaty fanafihana tsara lamina nataon'i Frantsa tao anatin'ny Mondialy:
Lohahevitra iray ao am-poko tokoa izany. Na dia Frantsay aza aho dia manam-piaviana Afrikana, zavatra iray ao am-poko tokoa izany manampy ny fanatanjahatena afrikana izany. Raha afa-manampy amin'ny alalan'ny lazako sy zavatra hafa izany dia ho ataoko am-pifaliana tokoa.
Didier Deschamps, mpanazatra ny ekipa frantsay izay nanana anjara toerana lehibe tamin'ny famolavolana ireo mpilalao tanora manantalenta ao aminy ho vondrona iray tsara rindra nanambara iza omanaraka izao momba ny fifandraisan'ny ekipa amin'i Afrika:
Efa hatramin'izay ny ekipa frantsay no nanana mpilalao avy any Afrika sy firenena ary zaratany hafa, ary tsy amin'ny football ihany fa amin'ny taranjam-panatanjahatena hafa ihany koa. Frantsay avokoa izy rehetra ireo ary mihambo amin'ny maha-Frantsay azy. Fa noho ny fiaviany, noho ny fahazazany dia manana namana ireo, manana fianakaviana avy amin'ireo firenena ireo ry zareo ka mba manana fifamatorana amin'ireo firenena ireo sy karazana fireharehana hoe hahita azy ireo hilalao famaranana mondialy ireny olona ireny.
Mahagaga ihany raha amin'ny taona 2018 misy olona tahaka ny Ambasadaoro Araud mbola mitsipaka ny fananan'olona iray mari-panondroana mihoatra ny iray, na mampihevitra ny maha-frantsay sy maha-afrikana ho mifanohitra. Tsy mitsipaka ny maha-frantsay ny mpilalao i Noah, mazva loatra, fa nilaza aza izy hoe afaka ny ho sady Afrikana no Frantsay ireo mpilalao ireo. Matahotra aho hanontany hoe hanoratra taratasy toy ireny ve i Araud raha manana fifamatorana amin'i Espaina ny mpilalao?
Miverina indray ny 1998, ary tsy amin'ny fomba tsara
Azoko ny fanahian'i Araud. Raha tsara amin'ireo fomba fitenin'ny sasany avy amin'ny elatra havanan'i Frantsa, tsy hahita ity fandresena miezinezina manan-tantara ityny fiakaran'ny fihetseham-po fasista mametraka fototra fa tsy “tena Frantsay” ireo mpilalao ireo. Nasehon'ireo mpanao matoandahatsoratra any Italia sy any Espaina ihany koa ny fijery fa tsy dia tena Eoropeana loatra ny ekipa frantsay ka tsy dia mendrika ankalazaina loatra. Ary nandao ny ekipa Alemà ihany koa ilay mpilalao baolina fandaka Mehmet Ozil vao haingana teo noho ny fanehoan-kevitra manavakava-bolonkoditra momba ny fiaviany Tiorka. Koa azoko ny ahiahy saingy tokony ho fantatr'i Araud fa amin'izao fotoana izao ianao tsy manakana ny fisandratan'ny fasisma amin'ny alalan'ny fanomezam-bahana ireo teboka firesaky ry zareo.
Nampianatra antsika ihany koa ny Tantara fa tsy nahavita nampihemotra ny fanavakavaham-bolonkoditra ny fahazoan'i Frantsa ny mondialy. Tsy ela taorian'ny fientanentanana nanaraka ny fandresena tamin'ny taona 1998, nahozongozon’ny fandresen'i Jean-Marie Le Pen manoloana ny favori—sady praiminisitra teo aloha—Lionel Jospin ka nahafahany nifaninana tamin'ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2002 i Frantsa. Io Le Pen io izay nilaza hoe:
Maizina loatra ny ekipam-pirenena ka tsy misolotena an'i Frantsa.
Roapolo taona taty aorian'iny fifidianana maha-ankona iny, mbola vitan'ny zanakavavin'i Le Pen antsoina hoe Marine indray ny niditra fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2017, saingy resy teo anatrehan'i Emmanuel Macron.
Namihina ny ekipam-pirenena i Macron, nanao ny fomba fankalazan'ny tanora an-tanandehibe sy nidera ny ekipa ho mpampiray ny Repoblikan'i Frantsa, firenena izay Frantsay daholo ny rehetra fa tsy ijerena volonkoditra na foko na kolontsaina. Fa ao anatin'izany politika izany indrindra no heverina ho miorina ny fifanenjanana ara-poko tsy azo idifiana ao Frantsa. Amin'ny fiezahana tsy mijery ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-poko, dia tsy ny fimaroana mivandravandra ihany no tsy hitan'ny Repoblikan'i Frantsa fa ny zavadehibe kokoa dia fafainy ho ao ambany karipetra ny fiavian'izany fimaroana izany—dia ny lasan'ny firenena naha-mpanjanatany azy.
Tantaran'i Frantsa taty Afrika
Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy manaiky isika fa raha marokolontsaina sy marofoko ny ekipam-pirenena frantsay amin'ny football, dia tsy izany kosa ny sangany ara-politikan'i Frantsa. Tsy mitahiry antontanisa amin'ny fandraisana anjaran'ny vitsy an'isa eo amin'ny sehatry ny asa i Frantsa saingy miharihary mampangirifiry fa ankavitsiana ny fisian'ny fisoloantena mainty hoditra eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana frantsay sy ny politika.
Angamba ny fahazoana fanindroany ny Amboara Manerantany no ahafahana manao resaka an-kitsimpo momba ny fimaroan'ny fiaviam-pirenena sy ny dikan'izany.
L’ambiance ?? mood@telefoot_TF1 @equipedefrance #fiersdetrebleus #worldcup2018 pic.twitter.com/qNg1VE4aTH
Nanomboka tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny manodidina ny taona 1960, nihazohazo tambonin'ny zanataniny tao Afrika Andrefana sy Madagasikara i Frantsa, saingy zavatra mampiady hevitra hatramin'ny ela ny fotoam-panjanahantany. Mbola tsy nekena amin'ny maha-heloka bevava azy, ohatra, ny fandripahan'olona tao Alzeria, Madagasikara ary Rwanda. Izany tsi-fisian'ny fanenenana izany no misoroka ny firenena handray tanteraka ny fimaroana ao aminy, ary mifandrohy izany amin'ny fifanenjanana ara-bolonkoditra misy amin'izao fotoana sy ny tsy fisian'ny fimaroana eny amin'ny tontolo izay tena mila izany.
Mety ho sarotra ny hahazoana adihevitra an-kitsimpo momba ny volonkoditra sy ny fahadisoana natao tao Afrika nandritra ny fanjanahantany, saingy ilaina ny hisian'izany hahatrarana ambaratongam-pisentoana. Hanaiky ny fahadisoany lasana ve i Frantsa, mety ho mora ny fotoana hamihinana ny anio-ny, ny ankehitriny rafetin'ny tanora manantalenta sy ny vahoakany maro isan-karazany, tahaka ny ekipany amin'ny football.
Saingy aleon'ny solontenan'ny Repoblika miady hevitra amin'ny mpampihomehy momba ny firafitry ny ekipan'ny baolina fandaka. Gadran'ny fomba fijery amin'izay tokony ho endrik'i Frantsa tafaray ny Ambasadaoro Araud, fomba fijery tsy mahita ny fifamatorana akaiky eo amin'ny maha-Afrikana sy ny maha-Frantsay. Ny miaramila afrikana an'arivony maty ho amin'ny fanafahana an'i Frantsa tamin'ny taona 1916 sy taona 1944 no afaka manamafy izany.
Angamba ny Amboara Manerantany fahatelo no hampisy fiovana. Angamba hahatakatra ny hanihany ka handray azy tsara i Frantsa rehefa mandresy amin'ny taona 2022. Avy eo hahafantatra izao tontolo izao fa nanao dingana lehibe nilaina ho tsy maintsy natao izy irosoana mankany amin'ny fiarahamonina anjakan'ny rariny sy tafaray.